Mishonga wabvisa, Animal kusvina, Sweeteners, Plant kusvina Oiri - Tong Rui Bio-Tech
Ramba Zvino Professional, Itai Our Life Zvakanaka!
Nanjing Tong Rui Bio-Tech Co, Ltd. inonzi TRB, yanga ichitarisa pazvisikwa zvemakore gumi nemasere, TRB ikambani yehunyanzvi-inosanganisa iyo inobatanidza R&D, kugadzirwa uye kutengeswa kwemusika wepasi rose. Zvigadzirwa zveTRB zvinosanganisira zvinotorwa nemuti, zvinomwiswa zvemhuka, zvinotapira, nootropics, muto wemichero uye mapoda emuriwo, mafuta anokosha uye zvekuwedzera zvinovaka muviri. TRB parizvino ine mafekitori maviri, imwe ndeye yakachena yakasikwa chirimwa fekitori fekitori, imwe inyuchi chigadzirwa fekitori, uye isu tine akateedzana ezvitupa senge ISO9001, ISO22000, HACCP, ORGANICAL, FDA, HALAL, KOSHER.
Green Tea wabvisa
Gotu Kola wabvisa
Tiri kugara nechemberi zvesainzi, kushingaira kubatanidzwa mudzimba uye dzakawanda zvedzidzo Misangano uye maindasitiri michina exchanges, uye kuronga akakodzera dzinongoitika mushoma mitemo. We vakava Anti oxidation, aphrodisiac zvinhu, sweeteners uye nootropics. zvigadzirwa edu zvinopisa-vaitengesa zvesainzi kumiganhu mumusika.
Top R & D kugona
Tava akaunganidza pamusoro R & D zvikwata uye midziyo mu China. Panguva iyoyowo, takagamuchira hwokugadzira kubvunza uye mabasa kubva akakodzera European uye American masangano. Tine zvedu akazvimirira mumarabhoritari, akakudziridza inoshanda unorapa nokuda kufanana dzinongoitika atakatora, uye ndava kunyatsoda tsvakurudzo Series pamusoro nomukaka uye monomers.
Makore 18 ekisipoti ruzivo, vanopfuura 200 dzakatevedzana zvigadzirwa, zviuru dzakawanda zvokufambisa tsika, nyika dzinopfuura 40 'wezvokutengeserana ruzivo, anoziva mitemo yenyika akakodzera, ichipa vatengi zvedu chinoumba zvinhu uye hot products. Panguva iyoyowo, tinosangana zvinodiwa nevamwe zvokutengeserana zvibereko makasitoma edu uye anopa mumwe-chichiita negadziriso Chinese utano zvigadzirwa.
Denda iri rave nekukwira kwakakura ...
Matipi akafanana: hutano hwemoyo, chro ...
Miti, izvo zvakajairika zvisikwa zvakakomberedza iwe ...
Munguva pfupi yapfuura, iyo yazvino data mushumo yakaburitswa ...